COVID-19 မူလဇစ်မြစ်ခြေရာခံရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နမူနာများအား လေ့လာမှုပြုလုပ်သင့်ဟု ကျန်းမာရေးပညာရှင်ပြော - Xinhua News Agency
မတ်ပူတို ၊ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ရောဂါ မူလဇစ်မြစ်ခြေရာခံခြင်း နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ပွားချိန်က ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၌ စုဆောင်းထားသော နမူနာများအပေါ် အခြေခံ၍ လေ့လာမှုပြုလုပ်သင့်ကြောင်း မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။“ ကမ္ဘာ့ နေရာသီးသီးရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် သို့မဟုတ် လေးနှစ်က သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နမူနာတွေကို စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သွားဖို့ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်” ဟု မိုဇမ်ဘစ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Eduardo Samo Gudo က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့်မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းစုဆောင်းစစ်ဆေးမှုတွင် တိရစ္ဆာန်များထံမှ ရယူထားသော နမူနာများလည်း ပါဝင်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ မတ်ပူတိုမြို့၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၃ ရက်က COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အကယ်၍ လုပ်ငန်းစဉ်သည် တစ်ဖက်သားထိခိုက်ပျက်စီးအောင် နိုင်ငံရေးအရ ပြုမူ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အမှန်တရားကို မည်သည့်အခါမျှ ရောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ ကျန်းမာရေးပညာရှင်က ဆိုသည်။
“ သိပ္ပံပညာဟာ နိုင်ငံရေးအသုံးချခံရချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ နဲ့ သဘောသဘာဝ အားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားရပါတယ် ၊ ပြီးတော့ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာ အမေ့ခံအပယ်ခံဖြစ်သွားပါတယ် ” ဟု Gudo က ဆိုသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးအတည်ပြုလူနာ စတင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချိန်သည် အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုး များစွာ ဖြစ်ပျက်နေခဲ့ပြီးသား ဖြစ်သည်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်မှလူသားသို့ကူးစက်ခြင်းဖြစ်စဉ်က အခြားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း Gudo က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ အရေးကြီးဆုံးက ကိစ္စရပ်အပေါ် နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်မထုတ်ဖို့ပါပဲ ၊ ရောဂါမူလဇစ်မြစ် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာပညာရပ်တစ်ခုပါ ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
MAPUTO, Sept.3(Xinhua) — Origins tracing and research work of COVID-19 should be carried out based on laboratory samples collected around the world prior to its outbreak in 2019, saidaMozambican health expert.
“It is important to carry out investigations on samples stored for the last three or four years in laboratories in various parts of the world,” said Eduardo Samo Gudo, deputy director of Mozambique’s National Health Institute, inarecent interview with Xinhua, adding that samples extracted from animals should be included.
“When science is politicized, we lose all scientific content and insight, and scientific arguments are forgotten,” said Gudo.
“The important thing is not to politicize the matter, the investigation of the origin isascientific, notapolitical issue,” he said.
1Photo taken on March 30, 2021 shows an exterior view of the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland. (Xinhua/Chen Junxia)
2A health worker collects blood sample for COVID-19 antibody test in Maputo, Mozambique on Aug. 3, 2020. (Photo by Israel Zefanias/Xinhua)